Huawei anotarisana nedambudziko kana ichida kuenderera ichishandisa Android | Linux Vakapindwa muropa
Huawei Yakave yechipiri pakukurukura nharembozha maererano nekutengesa, asi izvo zvinogona kuchinja mune ramangwana. Dambudziko nderekuti Google, iyo kambani yanga iri chikamu cheAlfabhethi Inc kwenguva yakareba, inomira kupa Hardware, software uye technical services kune iyo hofori yeChinese. Chinhu chega chichaenderera kukupa, uye nekuti hauna sarudzo, zvese zviri pasi peyakavhurwa sosi rezinesi.
Uye hazvisi izvo kuti Google ine dambudziko neHuawei, asi imhaka yezvinozivikanwa seTrump Administration, iyo yakaisa kambani yeChinese pane yakasviba, pamwe nemamwe makambani. Dambudziko rakatarisana naHuawei nderekuti zvishandiso zvavanogadzira kubva zvino hazvichakwanise kugadzirisa kune zvechizvino vhezheni zveApple zviri pamutemo, uye havazokwanise kushandisa masevhisi eGoogle. Kana tichida zvakavanzika, tinogona kufunga kuti yekupedzisira harisi dambudziko, asi ndipo patinoyeuka kuti Google Play, iyo Android chitoro chekushandisa, ndeimwe yemasevhisi ekambani yekutsvaga injini.
Iyo iripo Huawei inogona kuramba ichivandudzwa
Midziyo yatove pamusika haizokanganisike neichi chiyero. Izvi zvinoreva kuti, sezvakangoita akadaro mutauriri, "Kune vashandisi vebasa redu, Google Play uye Google Play Dzivirira kuchengetedzwa kwekuchengetedza kucharamba kuchishanda." Asi zvakadiniko nemidziyo yemberi? Chii chichaitika ndechekuti Huawei achafanirwa kupfuura pasina yepamutemo Google chitoro.
Kana akasiyana mavhezheni eApple emakomputa akatidzidzisa chimwe chinhu, ndechekuti iwe unogona kurarama pasina Google Play neGoogle masevhisi. Dzimwe dzeshanduro idzi dzinopa zvakananga Aptoide sechitoro cheapp, nepo vamwe vachida RaspAndFoot, ivo vanopa chishandiso chinotora maapplication kubva kuGoogle Play zvakananga, asi chete mahara. Asi iyo Google isingatumire Hardware kwavari ichaita kuvandudza kweiyo Android nemugadziri weChinese ... zvishoma nyore Tichafanirwa kumirira kuti tione kukanganiswa kweichi chiyero, asi ramangwana reHuawei rakasviba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Huawei anotarisana nedambudziko kana ichida kuenderera ichishandisa Android pamidziyo yayo
Iyo inorasikirwa zvakanyanya iGoogle, iyo inoratidza kuti ikambani yeCIA iri kushanda kwaTrump, pachinzvimbo chekuve kambani yepasirese.
Huawei anozoona zviri nyore kwazvo kuwana forogo yemahara yeAroid, uye nerutsigiro rwehomwe yezvehupfumi neetekinoroji senge China inogona kunge iri yemahara imwe nzira yatakatsvaga kwemakore.
Uye hazvidiwe kuti pirate zvitoro "Aptoide" maitiro, asi Huawei inogona kugadzira yayo yega Amazon sitoro uye kushandisa yayo 20% yemusika kutora pasi yakanaka kubva kuGoogle uye kuwana mari yakawanda.
Mhoro Miguel. Ehe unogona kugadzira chitoro chako, asi icho chine ZVESE ndicho chepamutemo.
Ini zvakare ndinofunga kuti uyo anorasikirwa zvakanyanya ndiGoogle.
Wathsapp inogona kutorwa pasi kubva kune webhusaiti yekushandisa. Teregiramu iri muF-Droid uye Gmail inogona kushandiswa kubva kuK9 kana chero imwe tsamba yekushandisa. Zvichida dambudziko rinogona kuitika neGoogle Drive kana imwe Pokemon Go mhando yemutambo. Asi maJapan haasi kuzosiya musika weChinese kuti ugone kutorwa kubva kune chimwe chitoro.
Apple ikambani yeNorth America saka ichafanirwa kudzora mashandiro ayo muChina.
Trump akangotora hutungamiriri hweUS mune nharembozha
Uku ndiko kusimuka-kumhepo kune mamwe makambani: Samsung, LG, nezvimwe. Uye yekumutsa-yekusheedza kuvanhu kuitira kuti zvachose uye vese vazive kuti HAUNOFANIRA kuvimba ne "gore". Kana zvinhu izvi zvikaitika pakati peGoogle neHuawei (KAMPANI DZINOGADZIRA Mabhiriyoni emadhora), unogona kufungidzira kune vanhuwo zvavo? haina kana kuchengetedzeka mugore uye yaive mhosho inotyisa kupa simba rakawandisa kukambani yekutonga seGoogle.
South Korea Hurumende ichaburitsa Windows kushandisa Linux